हाम्रो देशमा, विभिन्न जातिहरु को कुखुरा हुर्काउन। तिनीहरूलाई केही, रूस मा नस्ल केही - विदेश। कुनै पनि मामला मा जब खरीद कुखुरा सजग हुनुपर्छ लाभ वा एक वा अर्को फरक नस्ल को बेफाइदा के। अर्को लेखमा ती सबै भन्दा लोकप्रिय कुरा हुनेछ। देश मा सबै भन्दा मूल सजावटी चट्टानको - का को Pavlovian चिकन सुरु गरौँ।
Pavlovian कुखुरा - सबैभन्दा पुरानो सजावटी घरेलू जातिहरु मध्ये एक। यो असामान्य बाहिरी संग धेरै unpretentious सानो कुखुरा छ। यो नस्ल को सुन्दर उपस्थिति धन्यवाद मात्र होइन हाम्रो देशमा तर संसारभरि यति लोकप्रिय र छ। सुनको र चाँदीको - क्षणमा मात्र दुई यसको विविधता छन्।
त्यहाँ अनुसन्धानकर्ताहरूले बीचमा यी उल्लेखनीय कुखुरा सहमति को मूल लागि जाँदा। टर्की, अरूलाई पारंपरिक रूसी चिकन र कोचीन चीन को एक मिश्रण छ भन्ने विश्वास गर्छन् - केही तिनीहरू फारसी जातिहरु को प्रतिनिधिहरु को सन्तान, अन्य छन् भन्ने विश्वास गर्छन्। कुनै पनि अवस्थामा, acclimatization को सबै-रूसी प्रदर्शनी, नस्ल पहिलो Pavlovsk को गाउँमा देखि ल्याइयो Nizhny Novgorod प्रान्त। यसैले यसको नाम। यो घटना 1878 मा भयो। र 1899 मा अन्तर्राष्ट्रिय पोल्ट्री प्रदर्शनी को एक समिति राष्ट्रिय सजावटी रक रूस यस प्रकारको घोषणा।
यस मामला मा, यसको विविधता दुई आधिकारिक मान्यता प्राप्त गरिएको छ - चाँदी र सुनको। पछि - 1905 मा - एक स्वतन्त्र नस्ल विनियोजन रूपमा गरिएको र कालो Pavlovian कुखुरा। यो प्रजाति साइबेरियन mohnonozhki नाम थियो।
क्रांति पछि, हामी एक अद्भुत नस्ल लगभग सम्पूर्ण देश मा hatched विचार गर्दै छन्। यो 80 Leningrad (VNIIGRZH) मा गरेको मात्र पुनर्जीवित गर्न थाले। आधुनिक किसान नस्ल को गुणहरू मूल्यांकन गरेको, र आज यो kurovodcheskih फारमहरु मा छोडपत्र प्राप्त गर्न सम्भव छ।
नस्ल Pavlovian कुखुरा एकदम peculiar, पहिले नै उल्लेख रूपमा, छ। विशेष आफ्नो ठूलो शिखा गर्न आकर्षक एक टोप को रूप मा घुमाउरो। लक्जरी "सहायक" को मालिक पुरुषहरु तर पनि कुखुरा मात्र छैन। सुनको वा चाँदीको पृष्ठभूमि बाक्लो कालो specks मा - नस्ल उज्ज्वल, यसको विपरीत को प्रतिनिधिहरु को पक्षति। को टोप बाहिरी आकर्षण Pavlovian कुखुरा बाहेक spurs को रूप मा लामो अघि खुट्टा मा luxuriant feathering दिन्छ।
टोर्सो कुखुरा Pavlovian (सुन र चाँदी), राम्रो-विकास massiveness विशेषता, तर एकदम शिष्ट छन्। पुच्छर उनि एकदम उच्च उठाएको र घुमाउरो। Comb र earlobes वस्तुतः अनुपस्थित छन्। टाउको र कुखुरा र cockerels सानो svobodnozakruglennaya मा।
कुखुरा Pavlovian (फोटो तपाईंले यो पृष्ठमा हेर्न सक्नुहुन्छ) - प्रकृति कुखुरा dapper, धेरै मोबाइल र भरोसा गरेर। किनभने सुन्दर उपस्थिति को तिनीहरूलाई मुख्य रूप नस्ल। निस्सन्देह, तपाईंले तिनीहरूलाई र मासु र अन्डा देखि प्राप्त गर्न सक्छन्। तर, पहिलो मामला मा dilution unprofitable किनभने चरा को सानो आकार को हुनेछ। आधा भन्दा कुनै थप - वयस्क Pavlovian कुखुराको भाले दुई बारेमा किलोग्राम, को कुखुरी वजन। प्रति वर्ष बारेमा 180 अन्डा - यो नस्ल मा अन्डा उत्पादन पनि छैन विशेष ठूलो छ।
Pavlovsk hens ख्याल
चिकन को Pavlovskaya नस्ल किसानहरु पनि अलग अलग ruggedness बीच लोकप्रिय छ। हेरविचार मुख्यतया सही रुचाउने र मर्मतका मा निहित। सामान्य मा, Pavlovian कुखुरा अन्य कुनै पनि अन्डा बिछाउने कुखुरा वा सजावटी चट्टानहरू जस्तै तरिकामा नस्ल। आफ्नो सामग्रीको peculiarities र थप कुरा।
के बगाएको हुनुपर्छ
यी कुखुरा लागि बगाएको पनि उच्च छैन। धेरै तिनीहरूले आवश्यक छैन एक क्षेत्र ठूलो छ। दस कुखुरा मा पर्याप्त 3x3 पु बगाएको। यसको उचाइ2मिटर, वा चरा इच्छा जाडो चिसो नाघ्न हुँदैन। संरचना ढाक्नु चाहन्छन् छ। सस्ता विकल्प पर्खालहरु, padded खनिज ऊन संग संरचना कंकाल थियो। निर्माण समयमा यो गर्न हेर्न फेर्रेट चढ्नु सक्छ जसमा slits वा प्वालहरू बायाँ कहिल्यै महत्त्वपूर्ण छ।
कुखुरी घर तल्ला joists मा काठ वा माटोको हुन सक्छ। ठोस मा ब चिसो हुनेछ। कवर फर्श घास, पराल वा sawdust हुनुपर्छ। Pavlovian कुखुरा पनि ठूलो र गरिबी न्यानो राखिएको फरक छैन। त्यसैले तिनीहरूलाई गरम घर व्यवस्था गर्न को लागि राम्रो। साधारण कुखुरा जस्तै जस्तै कम तापमान, तिनीहरूले हस्तान्तरण छैन।
को henhouse सञ्झ्यालमा गर्न निश्चित हुनुहोस्। को चरा को सामान्य विकासको लागि सूर्यका र ताजा हावा आवश्यक छ। पर्खालहरु मध्ये पृथक एक ढोका एउटा प्वाल पर्छ। बन्द बार एउटा सानो चोकमा यसको बाहिरी पक्षमा।
एक चिकन Coop कसरी सुसज्जित गर्न
Perches, feeders र गुँड, के गर्न आवश्यक निश्चित नियम द्वारा निर्देशित। यस मामला मा, र कुखुरा सजिलो र सजिलो मालिकको तिनीहरूको हेरविचार हुनेछ। Perches सामान्यतया अन्यथा चरा चिसो प्राप्त, 80 सेन्टीमिटरको उचाइ मा स्थापित छन्। खिडकियों अन्तर्गत तिनीहरूलाई ठाँउ छैन।
गुँड को perches अर्को वा भुइँमा बस सेट पर्खाल गर्न nailed गर्न सकिन्छ। इष्टतम आकार - तिनीहरूलाई पराल वा पराल को भित्र अस्तर हेर्न 35h30h30 .. सेतो पत्थर आकारको अन्डा - यो डमी भित्र राख्न उचित छ। यस मामला मा, कुखुरा घरमा चुम्बन वर्तमान हुने छैन।
Feeders सर्वश्रेष्ठ खुट्टा मा सेट छन्। जमीन माथि तिनीहरूलाई उचाल्न एक सानो छ भने, कुखुरा कम स्क्याटर फिड हुनेछ। माथि, प्रत्येक गर्त माथि, "turntable" सेट। यसलाई आफ्नो अक्ष rotates भनेर यसको उत्पादन लागि दुई बारहरू संलग्न र पोल लाग्छ। थप निर्माण गर्त शीर्ष संलग्न छ। यो सरल यन्त्र चिकन को फिडर गर्न चढेका गर्छ भन्ने होइन र फोहर फाल्न मा नछोड सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
Granulated, अन्न, चोकर, मिश्रित चारा - hens आहार बिछाउने दुई-तिहाई forage हुनुपर्छ। साथै, यी चरा Mash खुवाउनुभयो। यो गर्न, कचौरा गाजर, बीट, आलु, स्याउ, कट nettle, बन्दागोभी र यति मा RUB। डी त्यसपछि सेतो रोटी र चोकर एक बिट थप्नुहोस्। परिणामस्वरूप मिश्रण केही नुन थप्न र यसलाई चक र पीठो को एक सानो बिट थप्न - माछा वा मासु। अन्डा उत्पादन वृद्धि गर्न डिजाइन विशेष मिश्रणों को पनि छन्। तपाईं साथै थप्न सक्नुहुन्छ। बिहान र साँझ चरा फिड अन्न। मैश भोजन दिनुहोस्। साथै, समय समयमा गर्न चिकन यार्ड बन्दागोभी, चुकन्दर, गाजर भन्दा माथि, nettles र यति मा फेंक गर्न। डी
Pavlovian कुखुरा को समीक्षा
निस्सन्देह, शायद जो कोहीले गम्भीर अन्डा वा मासु लागि नस्ल पतला थियो। तर, सबै भन्दा रूस सुन्दर को प्रतिष्ठा - यदि छैन दुनिया - उनको हालसम्म सुरक्षित गरियो। कुखुरा Pavlov - यो वास्तवमा धेरै शानदार कुखुरा छ। तिनीहरूलाई समीक्षा अक्सर बस उत्साही। विशेष गरी महिला मा। राख्न र सामान्यतः सजावटी रूपमा उल्लेख यी कुखुरा पाल्नु। हेरविचार को जटिलता सन्दर्भमा, किसान को बहुमत यो चरा धेरै unpretentious तर अनुकूल मात्र छैन कि सहमत हुनुहुन्छ।
किसानहरूलाई चासो छ, यो नस्ल यसलाई हालै पुनर्जीवित गरिएको छ भन्ने तथ्यलाई छ। 1988 मा, इटाली मा एक लिलामी मा Pavlovian कुखुरा को एक जोडी 2.5 मिलियन डलर को लागि बेच! प्रति टाउको rubles कुनै 200-300 भन्दा - को पाठ्यक्रम, अब कब्जा एकदम संसारभरि फारमहरु को धेरै को प्रजनन कि, यो धेरै कम लागत। त्यसैले, आफ्नो खुशी को लागि यी सुंदरियों को एक जोडी किन्न र कुनै पनि cottager किन्न सक्छन् जो साथीहरू र परिचितहरू को ईर्ष्या र प्रशंसा कारण।
रोजगार, अन्य कुराहरु पनि एकदम अनुकूल छ - केही Pavlovian नस्ल कुखुरा जस्ता प्रजाति को प्रजनन भन्ने विश्वास गर्छन्। को चिकन भन्ने तथ्यलाई अन्डा कोरलिँदै र वयस्क चरा धेरै स्वेच्छाले खरीद गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले, धेरै सिर्फ एक छोडपत्र र बिक्री तिनीहरूलाई राख्नुहोस्।
हेरचाह को सुविधाहरू, आफै गर्न सरलता, ध्यान बावजुद यो चरा लागि जाँदा, कुनै पनि अन्य जीवित प्राणीहरू जस्तै, पाठ्यक्रम, आवश्यक छ। माथि उल्लेख रूपमा, यसको लागि SHED राम्रो न्यानो छ संभावना छ। साथै, धेरै किसान यस चिकन हिउँदमा रोगको खतरा कम गर्न विशेष additives दिन सल्लाह छन्। तर, सामान्य मा, आफ्नो प्रतिरक्षा धेरै स्थिर रूपमा मूल्यांकन छ।
अन्य लोकप्रिय घरेलू जातिहरु
रूस को क्षेत्र मा नस्ल र दुनिया भर ज्ञात कुखुरा को प्रजाति, त्यहाँ धेरै छन्। यसबाहेक, सबै विवरण फरक छन् के सुविधाहरू हेर्न र सबै भन्दा राम्रो घरेलू नस्ल कुखुरा मूल्यवान छन्। सजिलो हुनेछ तिनीहरूको बलियो पक्ष आकलन गर्न यस लेखमा प्रस्तुत गरिने फोटो, साथ।
हामी पछिल्लो शताब्दीमा मास्को क्षेत्र को फारमहरु यो नस्ल ल्याए। उनको पुर्खाहरूको खैरो leghorn, हैम्पशायर र Yurlovsky छन्। मास्को स्वीकृत नस्ल कुखुरा 1980 मा भएको थियो। यो चरा मासु र अन्डा लागि नस्ल। साथै, यो संकर deriving मा कुखुरा अन्डा जातिहरु प्रजनन लागि प्रयोग गरिन्छ। प्राप्त एक धेरै उच्च उत्पादकत्व पार। उदाहरणका लागि, संकर प्रति वर्ष बारेमा 250 अन्डा उत्पादन गर्न सकिन्छ। एक उत्कृष्ट स्वाद विशेषता द्वारा तिनीहरूलाई को शरीर।
कुखुरा मास्को घर को पक्षति धेरै राम्रो हो - सुन गाढा। पहेंलो-खैरो को कुखुरा मा पुरुषहरु मा मात्र घाँटी छ - यस्तो कोलोरेसन् पछाडि वर्तमान छ। 3.5 किलो सम्म - पूर्व 2.3 किलो, दोस्रो गर्न वजन पाउन सक्छौं।
को एडलर चांदी कुखुरा
नस्ल मासु र अन्डा निर्देशन, एडलर धेरै प्रजाति पार उत्पन्न: नयाँ हैम्पशायर, सेतो रूसी, Yurlovsky, दिन र सेतो प्लायमाउथ रक। यो अत्यधिक उत्पादक र ruggedness छ। यी कुखुरा को वृद्धि औसत छ, र शरीर, संकुचित छ राम्रो मासु प्रकारका साथ। पक्षति एडलर नस्ल कुखुरा उज्ज्वल छ। उनको पुच्छर छोटो braids संग राउण्ड छ। टाउको र कुखुरा मा, cockerels र औसत आयाम छ।
4 किलो सम्म - वयस्क कुखुरा 2.8 किलो, roosters वजन। अन्डा मास्को भन्दा अलि कम एडलर मा कुखुरा बिछाउने - प्रति वर्ष बारेमा 180 अन्डा। आफ्नो मासु उज्यालो छाया द्वारा विशेषता छ र धेरै स्वादिष्ट हुन मानिन्छ। साथै, एडलर hens को प्रजनन बीफ जातिहरु मा उत्पादकहरु रूपमा प्रयोग गरिन्छ। क्षणमा, तिनीहरूले धेरै होनहार हुन मानिन्छ।
उत्पादकत्व मामलामा, यो प्रजातिहरु अन्डा-बिछाउने पर्छ। स्वीकृत Pushkin नस्ल कुखुरा 2007 मा भएको थियो। पुरुषहरु मा कालो धर्काहरू संग सेतो रंग कलम कुखुरा - गाढा स्थलहरू संग। को पुच्छर लामो खुट्टा, ठाडो उठाएको छ, र स्कालोप ट्रिम, ठाडो।
, Pushkin मुख्य रूप सादगी लागि नस्ल कुखुरा मूल्यवान राम्रो उत्पादकत्व संग मिलेर। प्रति वर्ष एक स्त्री देखि 220 अन्डा सम्म प्राप्त गर्न सक्छन्।2किलो - यो प्रजाति को वयस्क लंड 2.5 किलो, को कुखुरा वजन। यो चरा प्रजनन मा धेरै मासु छैन प्राप्त गर्न सकिँदैन, त्यो र यो अन्त गर्न तिनीहरूलाई जान्छ तथ्यलाई बावजुद। वयस्क चरा एक उत्कृष्ट प्रस्तुति छ भन्ने तथ्यलाई।
अर्को unpretentious र फलदायी नस्ल। उपनगरहरुमा gosptitszavode Kuczynski प्रदर्शित। अभिभावक चट्टानको avstrolorp प्लायमाउथ रक, Livenskogo कुखुरा, खैरो leghorn स्ट्रिप थिए। उत्पादकत्व प्रजाति मा मासु र अन्डा निर्देशन गर्न भन्छिन्। शरीर पक्षति Kuchinskaya वार्षिकोत्सव अदुवा पुच्छर - खडा कालो।
कुखुरा ग्रामीण प्रजनन को लागि सबै भन्दा उपयुक्त मानिन्छ क्षणमा "Jubilee" प्रकार। तथापि, तपाईं तिनीहरूलाई cages मा राख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि जटिल हेरविचार आवश्यक छैन भनेर धेरै undemanding चरा छ। आफ्नो सबैभन्दा रोचक सुविधाहरू एक पनि3डिग्री को एक तापमान मा, अन्डा उत्पादन कम छैन भन्ने छ। त्यसैले, तपाईं तिनीहरूलाई unheated coops मा राख्न सक्नुहुन्छ। मात्र कुरा - फोहर फाल्न नै समय आवश्यकता मा मोटा (कम्तिमा आधा एक मीटर) बनाउन। टाढा पर्याप्त घर देखि टाढा नै समय मा छोडेर हिड्ने यी कुखुरा प्रदान गरेर खाना पाउन सजिलो छ।
यो प्रजाति को प्रजनन चरा दुवै स्वाभाविक र incubator को मद्दतले हुन सक्छ। Commemorative कुखुरा Zdorovenki र बलियो जन्म छन्। Lunge यो नस्ल धेरै सानो छ। Kuczynski कुखुरी - हेरचाह आमा, तिनीहरूले farmed बच्चाहरु स्वीकार गर्न तयार हुन्छन्।
यो नस्ल मा अन्डा उत्पादन धेरै राम्रो छ। तर यदि केवल चरा overfeed छैन। जब धेरै लंड Hens कम अन्डा राख्नु, र। थाहा यो आवश्यकता। 13 मा चिकन सिर्फ एक कुखुरा आवश्यक छ। वर्ष देखि एक Kuchinskaya hens 220 अन्डा सम्म उत्पादन गर्न सक्छन्।
यी चरा नस्ल र मासु छन्। यो आफ्नो धेरै स्वादिष्ट छ। 3.7 किलो सम्म - Kuchinskaya चिकन जातिहरु गर्न 2.6 किलो, पुरुषहरु वजन प्राप्त छन्।
यो Ornamental कुखुरा सबै हाम्रो देश मा नस्ल को पुरानो जातिहरु मध्ये एक हो। यसको मूल केही लागि ज्ञात छैन। एक संस्करण अनुसार, यो रूस मा फारस देखि एक लामो समय पहिले ल्याए। तर अन्य अनुसन्धानकर्ताहरूले अनुसार, Orlov नस्ल कुखुरा कुनै गणना Orlov भन्दा अन्य नस्ल थियो। को 19 औं शताब्दीमा यो चरा थुप्रै घरपरिवारमा राखिएको।
यी कुखुरा धेरै सुन्दर, विभिन्न मौलिक रंग हो। साथै, तिनीहरूले नस्ल र अन्डा र मासु लागि गर्न सकिन्छ। कुखुरा मा टोर्सो उच्च र बलियो खुट्टा प्रकार ओरेल। आफ्नो पक्षति फरक हुन सक्छ। अक्सर, किसानहरु सेतो, calico, क्रिमसन, महोगनी र नस्ल कालो कुखुरा। को hallmarks एक चट्टानहरु र बाक्लो दाढी ट्यांक को उपस्थिति छ। बाहिरी एक विशेषता सुविधा पनि लामो घाँटी मानिन्छ। यस मामला मा, स्पिन धेरै दृढता पुच्छर तिर लगाइदिए।
3 किलो - पुरुषहरु Orlof चट्टानहरू4किलो, चिकन को एक वजन पुग्न सक्दैन। औसत अन्डा उत्पादन - प्रति वर्ष 150 टुक्रा। चिकन को Orlov नस्ल सामग्री धेरै unpretentious छ र राम्रो स्थानान्तरण जाडो महिनामा। यो बेफाइदा मुख्य रूप कि लगे छन् यसको प्रतिनिधिको एकदम लेट थाल्छन्। साथै, Oryol बचेराहरूलाई धेरै बिस्तारै fledge।
रूसी सेतो कुखुरा
यो नस्ल स्थानीय Leghorn कुखुरा पार गरेर अन्तिम शताब्दीमा रूस मा विकसित भएको थियो। हाल यति लोकप्रिय भएको 60s मा, त्यो आनन्द छैन। सामान्य यो नस्ल अजरबैजान, उज्बेकिस्तान र तुर्कमेनिस्तान मा किसानहरु नस्ल। रूसी प्रजनकों यसलाई सुधार मा काम जारी। एक वर्ष एक रूसी सेतो चिकन देखि 230 अन्डा सम्म उत्पादन गर्न सक्छन्। यो प्रजाति को बचेराहरूलाई कुखुरा प्वाल छैन। मात्र इन्क्यूबेटरों प्रयोग गरेर प्रकार। लाभ यस्तो लेकिमिया रूपमा साधारण रोगहरु गर्न मुख्यतया प्रतिरोध समावेश प्रकार गर्न। रूसी सेतो देखि मासु को Leghorn भन्दा tastier। साथै, तिनीहरूले कम तापमान सहन जस्तो देखिन्छ। अक्सर, यो नस्ल सानो फारमहरु र निजी पिछवाडे मा पाउन सकिन्छ।
यो धेरै रोचक नस्ल, को 19 औं शताब्दीमा रूस मा नस्ल छ। hens मा Yurlovsky उत्पादकत्व माथि जांच चराहरूले भन्दा अलिकति कम छ। वर्षमा एक बिछाउने कुखुरी बारेमा 160 अन्डा को कुल दिन्छ। कुखुराको भाले 3.3 किलो कुखुराको सम्म वजन - 2.5 किलो सम्म। यो नस्ल मुख्यतया roosters को चर्को गायन लागि बेशकीमती छ। मूल्य एक पटक ठीक आवाज गुणस्तर निर्भर छ। को कुखुराको भाले 22 खाता गाए भने, उहाँले सबै भन्दा राम्रो मानिन्छ थियो, र यो पैसा धेरै दिनुभयो। व्यक्तिहरूलाई, 18 खाता "टिप्पणी पकड", यो एक सानो सस्ता लागत। बाँकी पुरुषहरु mediocre छलफल गरेका थिए।
बाहिरी यी कुखुरा एकदम रोचक। कालो वा चाँदी संग काले पक्षति। बाक्लो खुट्टा, धेरै बलियो र लामो पर्याप्त एकै समयमा। रंग रूपमा पहेंलो र कालो हुन सक्छ। किसानहरु को सबैभन्दा कि चरा सामग्री मा unpretentious बताए।
कुखुरा को लोकप्रिय विदेशी जातिहरु (फोटो संग)
निस्सन्देह, हाम्रो देशमा मात्र होइन घरेलू कुखुरा नस्ल छन्। धेरै राम्रो उत्पादकत्व फरक र "विदेशी" चरा हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, एकदम रोचक एक नस्ल Lohman ब्राउन, जर्मनी मा उत्पन्न सकिन्छ। क्षणमा यो सबैभन्दा उत्पादक को एक मानिन्छ। एक वर्ष एक यस्तो कुखुरी 300 अन्डा सम्म राख्नु गर्न सक्नुहुन्छ।
अर्को रोचक चट्टानहरु को Leghorn छ। यी कुखुरा इटाली नस्ल र अन्तिम शताब्दीको सुरुमा रूस ल्याइएको थियो। एक देखि बिछाउने कुखुरी प्रति वर्ष बारेमा 250 अन्डा उत्पादन गर्न सक्छन्। क्षणमा Leghorn सबैभन्दा रक को दुनिया मा साधारण हो। अक्सर तिनीहरूले उच्च अन्डा उत्पादन संग संकर को प्रजनन को लागि प्रयोग गरिन्छ। रूस मा आज यस प्रजाति को सुधार र यसलाई संग संयुक्त लाइनको निर्माणमा संलग्न 20 भन्दा बढी प्रजनन केन्द्र हो।
निजी किसान, बिक्री को लागि कुखुरा को प्रजनकों पनि यस नस्ल को धेरै रुचाउनु छन्। को Leghorn साथै कक्षहरू सामग्री सहन भन्ने तथ्यलाई। यी कुखुरा को विशेष सुविधाहरू पहिलो वर्ष तिनीहरूले स्थानीय hens भन्दा बढी अन्डा दिन भन्ने तथ्यलाई छ। यसबाहेक, यस सन्दर्भमा आफ्नो दक्षता निकै कम छ। त्यसैले जीवनको दोस्रो वर्ष तिनीहरूलाई सखाप।
सही नस्ल कसरी चयन गर्न
तसर्थ, हामी के सुविधाहरू हाम्रो देश मा नस्ल कुखुरा को सबै भन्दा राम्रो जातिहरु भेद, dismantled छन्। Ornamental प्रजातिहरू सन्दर्भमा यहाँ विकल्प सरल छ। तपाईं के गर्न आवश्यक सबै - राम्रो अप एक वा अन्य नस्ल किनेको कसरी पत्ता लगाउन छ। र, को पाठ्यक्रम, सौन्दर्य बाहिरी चरा बारे आफ्नै विचार गरेर निर्देशित। सामान्य नस्ल धेरै कारक आधारित चुनिएको:
उत्पादन को दिशा मा। प्राय यी दिन, किसान एक सार्वभौमिक मासु-अन्डा hens सुरु गर्न रुचाउँदैनन्। एक संकर - कहिलेकाहीं प्राथमिकता वास्तविक रक, कहिलेकाहीं दिइएको छ। उत्तरार्द्ध मामला मा, तपाईं थप मासु र अन्डा प्राप्त गर्न सक्छन्, तर चरा समय समयमा पुन: किन्न छ। सन्तानका मा Crosses को उच्च उत्पादकत्व पारित गर्दैन भन्ने तथ्यलाई।
सामग्री सर्तहरू अन्तर्गत। केही चिकन जातिहरु साथै चिसो रूसी जलवायु छाँटकाँट छैन।
अन्डा उत्पादन र वजन लागि। तपाईं पनि मासु को स्वाद ध्यान गर्नुपर्छ। कुखुरा बाट अन्डा आकार, खोल रंग र पनि यसको मोटाई मा फरक हुन सक्छ। केही जातिहरु सबै वर्ष दौर जन्म हुनुहुन्छ, केही विश्रामहरू molting समयमा गर्छन्। यो पनि विचार लायक छ। जाडो अन्डा उत्पादन ड्रप सक्छ, तर शायद छैन, यो सबै विशिष्ट प्रकार र तापमान मा निर्भर गर्दछ। भनेर छनोट खलिहान को वार्मिंग को डिग्री असर गर्न सक्छ।
साथै, एक विशेष नस्ल को अधिग्रहण अघि, तपाईंले यो निमित्त प्रजनन केही तरिकाहरू खोज्न गर्नुपर्छ। कुखुरा को ठूलो र मध्यम आकारको फारमहरु मा सामान्यतया cages मा राखिन्छ। गर्मी बासिन्दा र गाउँलेहरू तिनीहरूलाई मुक्त-सीमा प्रकार। र, पाठ्यक्रम, ती hens नस्ल, समीक्षा अनुभवी किसान देखि सकारात्मक छन् जो चयन गर्नुपर्छ।
टमाटर मा लेट blight को रूप: लड्न कसरी
अङ्गुर Nesvet डन: विविधता को फोटो र विवरण
Vineta - आलु किसिम। विवरण, फोटो
फूल रियो: तस्बिर र यसको हेरविचार
बाल रंग को उज्ज्वल र अद्वितीय प्यालेट "इगोर"
मास्को लोहार आइरिस पब
हाम्रो सडकको लागि MAZ "Zubrenok"
कुनै पनि वर्ष मा, रोस्टर कुखुरा को वर्ष? यो प्रश्न धेरै मानिसहरू आश्चर्य